बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्नुहोस् यी काम, रातारात बन्नुहुनेछ धनी ! – Motivate Me
बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्नुहोस् यी काम, रातारात बन्नुहुनेछ धनी !
व्यवहारिक अर्थशास्त्रका पिता रिचर्ड थेलरले नोबेल पुरस्कार जितेपछि भनेका थिए, धनी जो कोही पनि बन्न चाहन्छ, त्यसैले धनी बन्नका लागि सही दिशा तय गर्नुपर्छ । एउटा कथन छ कि बिहान जस्तो हुन्छ दिन पनि त्यसैरी नै बित्छ । अर्थात् बिहानीले दिनको संकेत गर्छ ।केही काम भने बिहान गरेमा सुख समृद्धि आउँछ ।
बिहान उठेपछि स्नान गनुपर्छ । धार्मिक पुराणमा दिनको शुरुवात स्नानबाट हुनुपर्ने बताइएको छ । यसले दिनभरको उर्जा सञ्चय हुन्छ ।स्नानपछि तत्काल नै भगवानको नाममा दियो बाल्दा पनि समृद्धि आउँछ । पूजापाठ, भगवानको नामको जप गरेमा सुख समृद्धि साथमा हुन्छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल👇👇👇 क्लिक गर्नुहोला *****
Published September 20, 2021 By mm_xsar
जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउदै आएका १८ राउटेको एक्कासी मृ’त्यु
यीनै हुन् पबित्र, जो सेती नदीमा खसेर बेपत्ता बनिन्